Soosaarayaasha wax soosaarka iyo alaabada | Shiinaha Qodista Wershad yar
Hole Saw Iyo Qalabka
Screwdriver Waxyar iyo Qalabka
Carbide grit godka miinshaar
Sawirka daloolka CT
Daloolida biraha biraha
Tallaabo xoogaa ah
Sharaxaad: Steel Bir Xawaare Sare leh oo loogu talagalay kartida la xaqiijiyay iyo adkeysiga godadka qodista. Ating Dahaarka Titanium wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa kuleylka, daxalka iyo u adkeysiga miridhku. Design Naqshad laba-biibiile ah ayaa si dhaqso leh u nadiifisa jajabyada waxayna u oggolaaneysaa in walxaha si fudud uga baxsadaan Numbers Lambarrada xardhan waxay kordhinayaan muuqaalka tallaabada ● Waqti badbaadi maxaa yeelay uma baahnid inaad beddesho layliyo loogu talagalay godadka wareega ee cabbirkoodu kala duwan yahay ee waxyaabaha khafiifka ah. Leyli kastaa wuxuu u shaqeeyaa sidii tijaabo loogu talagalay cabbirka xiga. Codsiga: ● Ku habboon qodista saxanka birta, ahama ...
Qeybo daloolin ah
Sharaxaad: finish Dhammeystirka dusha sare: Qarxinta ciidda ● Cabbirka: 6mm ilaa 40mm Application Wareeg shank ah ama Hexagon shank Codsi: ● Adeegso tayada sare ee qalabka wax lagu goynayo ee laga sameeyay birta kaarboon sare leh. Product Badeecadani waa mid si gaar ah loo qaabeeyey madaxa, laba lagu daray laba gees, geesaha oo aad u saxsan, fiiqan, goyn degdeg ah. Waxaa laga sameeyay birta daawaha ah ee been abuurka ah iyo kuleylka lagu daaweeyay ee loogu talagalay nolosha dheeriga ah. Talo-bixin is-dul-saar ah oo fudud, bilaw-bilow ah, iyo jajabku waxay ka baxaan walxaha markay jaraan. Is-danaysid baaxad leh ...
SDS oo lagu daray qaniinyada daloolinta dubbe
Sharaxaad tip Caarada carbideeda finish Dhammeystirka dusha sare: Qarxinta ciidda ● Cabbirka: 1/2 “illaa 7/16” Codsiga heads Madaxyada carbide-ku-fiiqan ayaa ka adag, ka adag oo ka adkaysi badan oo ku adkeysan kara culeysyo culus design Naqshadeynta biibiilaha si loo yareeyo culeyska xoogaa iyo samee xoogaa socod ah qaboojiye ● Nidaamka curyaaminta iyo adkaanta ee nolosha dheer. ● Waxay ku habboon tahay codsiyada guud sida godadka gargaarka ee goynta galaaska, musqusha iyo rakibaadda qubayska, qodista iyo muraayadaha dhejinta, dejinta boolal la taaban karo oo ku dheggan iyo qaar kaloo badan ...
Qaybo ka mid ah muraayadaha qoditaanka
Sharaxaad: tip Caarada carbide finish Dhammeystirka dusha: Zine dahaarka leh ● Cabbirka: 3mm ilaa 12mm Codsiga: ● Caarad tayo sare leh oo leh madaxa la xoojiyay si loo yareeyo buuqa, looga hortago xoogaa dildilaaca iyo dheemanka dhulka lagu jaro ee dheeman ayaa bixiya nolol dheer ● Wanaagsan codsiyada caadiga ah sida godadka gargaarka ee goynta galaaska, musqusha iyo qubeyska, qubeyska iyo muraayadaha dhajinta, dejinta fureyaal shub ah oo leben ah iyo kuwo kaloo badan ● Waxay bixisaa laylis siman, oo sax ah dhalooyinka, dhoobada iyo Baakadaha dhoobada: ● ...
Daloolin HSS qalloocinta
Description Waxyaabaha: 6542, 9341, 4341, 4321 ● Dhammaadka dusha: Black oxide, Tin dahaarka leh, Chrome dahaadhay ● Cabbirka: 1mm ilaa 14mm Codsiga: ● Laga sameeyay birta xawaaraha sare leh, yaree khilaafka iyo kuleylka badan ee isku dhafka ugu fiican xoog, iska caabbinta kuleylka iyo xirashada iska caabin function Shaqada iskiis udhiska, meeleynta saxda ah life Nolol dheer, Khasaar hoose ● Waxaa loo adeegsaday biraha khafiifka ah, alloysyada, alwaaxda iyo balaastigga, waxay u fiican yihiin shaqada gudaha iyo dibedda ● 135 ° ama 118 ° Split point, waxay kordhisaa jarista xawaaraha, cadeeya jajabyada iyo qeybta ...